पुर्व राष्ट्रपतिको शव चिहानबाट निकाल्न आदेश, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
पुर्व राष्ट्रपतिको शव चिहानबाट निकाल्न आदेश, के हुन्छ अब ?
एजेन्सी। जिम्वावे स्थित एक अदालतले पुर्व राष्ट्रपति रोवर्ट मुगावेको पार्थिव शरिर चिहानबाट निकाल्न सकिने निर्णय दिएको छ। एकजना परम्परागत नेताले मुगावेको अन्त्येष्टिले साास्कृतिक मान्याताहरु उल्लंघन गरेको आरोप लगाएपछि अदालतले सो सहमति जनाएको हो।
लामो समय सम्म उनी जिम्वावेको सत्तामा रहेका थिए। सत्ताबाट अपदस्थ गरिएको दुई वर्ष पछि अर्थात सन् २०१९ मा उनको निधन भएको थियो। पन्चानब्बे वर्षको उमेरमा मृत्यु भएका मुगावेको शव उनको पारिवारिक फार्म हाउसको आागनमा समाधिष्ठ गरिएको थियो।
तर गत मे महिनामा इकजना परम्परागत नेताले उनको अन्त्येष्टिमा स्थानिय संस्कार तोडिएको भन्दै अदालतमा उजुरी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार निकाय रोयटर्सले जनाएको छ। स्थानिय सोना भाषामा निर्णय सुनाउँदै अदालतले कुतामामा गाडिएको मुगावेको शव निकालेर राजधानी हारारे स्थित नेसनल हिरोज एकरमा समाथिष्ठ गर्न सकिने जनाएको छ।
मुगावेको परिवारले अदालतको निर्णयलाई चुनौति दिएको थियो। तर अदालतले सो चुनौति दर्खास्त गरेको छ। सो परिवारले यस निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्न सक्ने विविसिका पत्रकार सिन्गाइले बताएका छन् । जिम्मेवावेले स्वाधिनता हासिल गरेयता सन् १९८० देखि २०१७ सम्म मुगावेले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
यसै गरि , फगानिस्तानका तालिवान लडाकुहरुले एकजना अफगान सैनिकको टाउको काटेर त्यसको केश समाउँदै आफ्ना नेताको स्तुति गाउँदै रमाइरहेको भिडियो फुटेज एउटा निजि तालिवान च्याटरुममा पोस्ट गरिएको छ। वासिंगटन एक्जामिनरले प्राप्त गरेको यो ३६ सेकेन्डको भिडियो एक साता अघि पोस्ट गरिएको हो।
तर यो भिडियो कहिले खिचिएको भन्ने स्पष्ट छैन। जेहोस् अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेकपछि १७ अगष्टमा तालिवान नेताहरुले सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई क्षमा दिइने तथा महिलाहरुको रक्षा गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए।
सो भिडियोमा शि विहिन एक पुर्व सैनिक प्रमुखको शव वरपर तालिवान लडाकुहरुले खुशी मनाइरहेको देखिन्छ। तालिावन प्रवक्ता जविहुल्लाह मुजाहिदले भनेका थिए , ‘ म संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कसैलाई पन हानी नपुर्‍याइनेबारे विश्वस्त पार्न चाहुन्छुं। हामी कुनै पनि आन्तरिक वा बाह्य शत्रु बनाउन चहन्नौं। ’
सो भिडियोमा पाँच पुरुषले राइफल बोकेको , छैंठौंले एउटै हातले दुईवटा रक्ताम्य छुरा समाएको र सातौं व्यक्तिले फिल्म खिचिरहेको देखिन्छ। तिनीहरु शिरविहिन शवको ढाडमा बसिरहेको पनि देखिन्छ। अफगानिस्तानको राजनीतिक परिस्थिती माथि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान केन्द्रित रहेको छ।
यसै गरि, अष्ट्रियामा एकजना पुरुषले आफनी आमाको लाशलाई ममि प्रविधिबाट सुरक्षित अवस्थामा एक वर्ष समम आफ्नो घरको तहखानामा लुकाएर राखेको प्रहरीले जनाएको छ। निरन्तर आमाको पेन्सन पाइरहने लोभमा उनले यस्तो काम गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। स्मरण शक्ति गुम्ने रोगबाट पिडित ति ८९ वर्षिया वृद्धाको गत वर्षको जुनमा प्राकृतिक कारणबाटै निधन भएको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
६६ वर्षिय छोराले लाशलाई जतनका साथ ब्यान्डेज लगाएर र गन्हाउन नदिन आइस प्याक प्रयोग गरेर भुमिगत तल्लामा लुकाएर राखेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। प्रहरीले नाम नखुलाइएका उनले गैरकानुनी ढंगले करिव ५० हजार युरो पेन्सन वापत सरकारबाट बुझेको हुनुपर्ने बताएको छ ।
पश्चिमी टाइरोल क्षेत्रको उनको घरमा नयाँ हुलाकीलाई पेन्सन बुझाउन जाँदा वृद्धासंग भेट गराउन अस्विकार गरिएपछि ठग छोरोको भण्डाफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। आम्दानीको कुनै श्रोत तथा अन्त्येष्टि र घर चलाउन समेत खर्च नभएकाले उनले यो अपराध गरेको स्विकारेका छन् ।